I-BOOM 2 sisithethi sokuGqibela seendlebe esaphula iirekhodi ngePatiUP | Iindaba zeGajethi
I-BOOM 2 sisithethi sokuGqibela seendlebe esaphula iirekhodi ngePatiUP
Nge-30 kaNovemba, iiNdlebe eziGqibeleleyo zikwazile ukubetha kungekho ngaphantsi kwe Ingxelo yeGuinness ngokwazi ukudibanisa elona nani likhulu lezithethi ezingenazingcingo ezakhe zabonwa kwisixhobo esinye. Akukho zixhobo zingaphantsi kwe-208 BOOM 2 ezivela kwiiNdlebe eziPhezulu, ukukhala ngaxeshanye. Ngesi sizathu, abafana abavela kwi-Ultimate Eears basimemele kwiminyhadala yabo eMadrid apho sasinokubona khona ngqo kwaye siqondise indlela esi sandisi-lizwi "singenakususwa" sichithwa ngayo. Sikwazile ukuvavanya isandi sayo kwezona meko zigqithileyo, yiyo loo nto Sifuna ukukuxelela ukuba yeyiphi imbonakalo yethu malunga ne-BOOM 2, isithethi esingenazingcingo onokuthi uphosa ipati ngaso nangoko.
Ukuqala, isitshixo silele ngaphakathi Iqela, Isicelo esifumanekayo kubo bonke abasebenzisi be-iOS kunye ne-Android kwaye esivumela ukuba sikwazi ukuvumelanisa inani elingenasiphelo lezixhobo IBOMOM, BOOM 2 kunye neMEGABOOM. Ngale ndlela, sinokucwangcisa ipati ngendlela elula, umsebenzisi ngamnye kunye nomhlobo banokuzisa i-BOOM yabo kwaye ngokuzenzekelayo, ngekhonkco, baya kuthi bonke badibane badlale umxholo womculo ofanayo. Yile ndlela sifike ngayo kwi-50 BOOM 2 eMadrid kwaye sakwazi ukonwabela umgangatho wabo weaudio ngelixa "sibaphethe kakubi".
1 Intlanganiso yokuGqibela yeendlebe
2 Yintoni eyenza i-BOOM 2 ikhetheke kangaka?
3 Uyilo kunye nokufumaneka
Intlanganiso yokuGqibela yeendlebe
Inkampani ye-Ultimate Ears yaziwa kakhulu ngo-1995 ngokwenza ii-headphone zesiko kumagcisa omculo. Ngele ndlela, I-80% yamagcisa akumgangatho ophezulu anolu hlobo lwezinto kwiikonsathi zawo, ukubanika ithuba lokumamela ngcono kwaye banikeze owona mxholo ubalaseleyo kubathengi babo. Kwiminyaka elishumi elinanye kamva, iindlebe zokugqibela ziyaqhubeka nokwandisa ishishini, kwaye namhlanje zisinika uluhlu lwezithethi ezingenazingcingo ezingashiyi mntu ngokungakhathali, ngakumbi ngoku ekubeni zingabanini beLogitech eyaziwayo, uphawu lwehardware kunye nesoftware andinakukhanyela. Ke ukuba ubungazi ngeeNdlebe zokugqibela, Kuya kufuneka ukhumbule ukuba iLogitech ixhasa itekhnoloji yayo kunye nezixhobo, ngaloo ndlela sinyamalale nakuphi na ukuthandabuza malunga nolu phawu lwetekhnoloji engenazingcingo yeefowuni kunye nezithethi.
Yintoni eyenza i-BOOM 2 ikhetheke kangaka?
Inyaniso yokuba ungayihambisa naphi na kwaye ufuna ntoni ngaphandle koloyiko lokuyigcina. Izixhobo zomsindo ngokubanzi zibuthathaka, ngakumbi xa ujongene namanzi, intshaba yayo yoluntu inamba yokuqala. Nangona kunjalo, Iindlebe Zokugqibela I-BOOM 2 ayinaloyiko nantoni na, ezi zithethi zingasebenzisi zingcingo, zinetekhnoloji yeBluetooth, zibonisa ukunganyangeki kwamanzi (IPX7) kunye nengubo yerabha ekumemayo ukuba uyilahle ngaphandle koloyiko. Kungenxa yesi sizathu le nto iba liqabane elifanelekileyo kumaqela ethu. Ixabiso alizukuba yinto oyikhathaleleyo xa usazi ukuba ubala isixhobo ekunokwenzeka ukuba singachithi.
Ke, njengoko ubona kumfanekiso ongentla, ndikulungele ukuyibeka phantsi kwamanzi ngelixa ndidlala ingoma, kwaye kude nokuqhwanyaza, amanzi ayatshiza, amaza esandi kunye namandla e-Ultimate Ears BOOM 2 ayesenza umsebenzi.
Uyilo kunye nokufumaneka
Inemibala kwaye iyonwabisa, luphawu lwazo kwaye ziya kusinceda ukuba singaphoswa yimva kwemini enkulu ehlotyeni echibini. Nangona kunjalo, iintlelo ezintathu ezikhethekileyo kunye nezilinganiselweyo ziya kongezwa kwikhathalogu esele ikho, kulandelwe ubuhle kunye nokwahlula imigca kwezinye izixhobo kwibala elifanayo. Ngale ndlela sifumana iVynil enoyilo olungenangqondo ngakumbi, i-NInja, ngokudibanisa imibala engaqhelekanga kwaye ekugqibeleni iDownton, evusa ezona mvakalelo zithandwayo ezidolophini. Ezi modeli zikhethekileyo ziya kufumaneka kwi I-El Corte Inglés, iAmazon kunye neMedia Markt, kwaye zezizithethi zibetha kakhulu, ezi nkampani ziye zafuna ukuba nemodeli eyahlukileyo neyodwa, onokuyithenga ngexabiso 199 € kwiivenkile zabo ngokwasemzimbeni nakwi-intanethi.
Ukuba ulithandile eli nqaku kodwa ufuna ulwazi oluthe kratya, unga funda uphononongo lwethu oluneenkcukacha lwe-UE Boom 2 apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-BOOM 2 sisithethi sokuGqibela seendlebe esaphula iirekhodi ngePatiUP